को बन्ला दोस्रो नेपाल आइडल, कसको सम्भावना कति ? - Everest Dainik - News from Nepal
लोकेश धामी, काठमाडौं । नेपाल आइडल सिजन २ को ‘अन्तिम चार’ मा पुग्ने प्रतिस्पर्धीको टुंगो लागेसँगै अब उपाधि कसले जित्ला भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ ।
उपाधि भिडन्त आउन धेरै दिन नरहेकाले यो हप्तालाई प्रतिस्पर्धीले विशेष बनाउने छन् । विशेष भन्नुको अर्थ सक्दो उत्कृष्ट प्रस्तुति दिने प्रयास गर्ने छन् ।
आइडलमा बाँकी रहेका चार प्रतिस्पर्धीका समर्थक आफूले रुचाएको व्यक्तिलाई विजयी गराउन अहोरात्र खटिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि ठाउँठाउँमा भोट बटुल्ने विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएका छन् ।
चारै प्रतिस्पर्धी केही दिनअघि भोटको अपिल गर्न गृहजिल्ला पनि गएका थिए । र, उनीहरु त्यहाँबाट फर्किसकेका छन् । प्रतिस्पर्धीले गृह जिल्ला रहँदा समर्थकको व्यापक माया र हौसला पाए ।
दोस्रो नेपाल आइडल को बन्ला, कसको सम्भावना कति ?
रवि आइडलको उपाधि जित्ने मध्येका प्रमुख दाबेदार हुन् । उनले अहिलेसम्म राम्रो भोट पाउँदै ‘टप ४’ मा स्थान सुरक्षित गर्न पनि सफल भएका छन् । साथै, रवि हालसम्मको अंकमा ‘डेन्जर जोन’ मा पनि परेका छैनन् । यसले गर्दा पनि रविले उपाधि जित्नसक्ने सम्भावना बलियो छ ।
याे पनि पढ्नुस नेपाल आइडलको ‘टप ६’ का लागि भिडन्त, रविले आज पप गीत गाउने
उनले उपाधि जित्ने अरु कारण मध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट आइडलमा सहभागि एक मात्र प्रतिस्पर्धी हुन् । यसबाहेक उनले उपाधि जित्न सक्ने थुप्रै कारण छन् । उपाधि भिडन्त नजिकिएसँगै रविका समर्थक पनि त्यहीअनुसार बढिरहेका छन् ।
साथै, उनी दलित समुदायबाट आइडलमा बाँकी रहेका प्रतिस्पर्धी भएकाले रविलाई सबैको साथ छ । नेपालमा मात्र नभई उनका विदेशमा पनि हजारौं समर्थक छन् । यसकारण पनि रवि दोस्रो नेपाल आइडल बन्न सक्छन् ।
बिक्रम पनि आइडलको मुख्य दाबेदार हुन् । धेरैको अनुमान छ यो पटकको उपाधि जित्ने बिक्रमले नै हो । तर, भोटिङ प्रणालि भएकाले उनले नै उपाधि जित्न सक्छन् भनेर ठोकुवा गर्न गाह्रो छ ।
पोखरा अडिसनबाट आइडलमा भाग लिएका बिक्रमले अहिलेसम्म दमदार प्रस्तुति दिदैं स्रोतादर्शकको मन जित्न सफल भएका छन् । उनी आइडलमा ‘गोल्डेन माइक’ विजेता प्रतिस्पर्धी पनि हुन् ।
गज्जब विषय त केछ भने गत संस्करणको आइडल विजेता बुद्ध लामा र बिक्रमका संगीत प्रशिक्षक अर्थात् गुरु एउटै हुन् । यसकारण पनि धेरैले यो पटक पनि पोखराले नै उपाधि जित्न सक्ने आँकलन गरेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस कतारमा नेपाली आइडलको फिनाले सम्पन, पहिलो नेपाल आइडल बने बुद्ध लामा
तर, बिक्रम यसअघिका धेरै अंकमा ‘डेन्जर जोन’ मा पर्दै आएकाले उनले उपाधि जित्नसक्ने ठोकुवा गर्न भने कठिन छ । अब हेरौं उनको आइडल बन्ने धोको पूरा हुन्छ या हुँदैन ।
सुमित आइडलको उपाधि जित्नसक्ने मध्येका अर्का प्रतिस्पर्धी हुन् । उनी शुरुवातदेखि नै आइडलको दाबेदारका रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । ‘गोल्डेन माइक’ विजेतासमेत रहेका उनी ‘टप ४’ मा प्रवेश गर्दा पनि सर्वाधिक भोट पाउन सफल भएका थिए ।
यसले के जनाउँछ भने सुमित आइडल जित्न सक्छन् । उपाधि भिडन्त नजिकिएसँगै भोट संख्या अत्यधिक बटुल्न सके उनले नै यो वर्षको आइडलको उपाधि नलैजालान् भन्न सकिन्न । तर, झापाबाट दुई प्रतिस्पर्धी भएकाले अलि कठिन पनि छ ।
सुमितको गृहजिल्ला झापा हो र यही जिल्लाबाट अर्की प्रतिस्पर्धी अस्मिता अधिकारी पनि छन् । हुन त जिल्ला विशेष मात्र हेर्नु जतिको मूर्खता केही होइन । तर, पनि यस्ता भोटिङ प्रणालीमा आफ्नोपन झल्किहाल्छ र आफ्नैबाट बढी भोट आउँछ भन्ने आशा बढी हुन्छ ।
याे पनि पढ्नुस कुनै बेला म्यादी प्रहरी बनेका थिए रवि, बन्लान त नेपाल आईडल ?
खैर, सुमितले नेपाल मात्र नभई विदेशमा बस्नेको मन पनि जितेका छन् । यसकारण उनले आइडलको उपाधि जित्न सक्छन् । सुमित पनि यसअघिका केही अंकमा कम भोट पाएका आधारमा ‘डेन्जर जोन’ मा परेका थिए ।
अस्मिता दोस्रो नेपाल आइडल बन्न सक्ने प्रबल दाबेदार हुन् । उनका हरेक प्रस्तुतिले दर्शकस्रोता आकर्षित भएका छन् । आइडलमा एक मात्र महिला प्रतिस्पर्धी भएकाले यो पटक कतै उनैले पो उपाधि जित्दीनन् भन्ने धेरैको आँकलन छ । अस्मिताको गृह जिल्ला झापा हो ।
त्यहाँबाट सुमित पनि उपाधिका लागि भिडिरहेका छन् । यसले गर्दा अस्मितालाई केही असर पर्ने देखिए पनि उनले हजारौं समर्थक देश तथा विदेशमा कमाइसकेकी छन् ।
अस्मितामा सबै किसिमका गीत गाउन सक्ने क्षमता छ । त्यो क्षमतलाई आउने बिहीबार झन प्रस्फोटन गर्न सके उनले यो पटकको आइडल बन्न सक्ने सम्भावना धेरै छ ।